Madaxweeynaha Soomaaliya oo maanta khudbad xasaasi ah ka jeediyay Shirweynaha Istanbuul. | raascasayrmedia.com
← Qabanqaabada Shir caalami ah oo Soomaaliya ku saabsan oo Istanbuul ka socota.SAWIRO
Roobab Khasaaro geystay oo Ka Da’ay degaano Ka tirsan gobolka casayrland →
May 22, 2010 · 5:34 pm
Madaxweeynaha Soomaaliya oo maanta khudbad xasaasi ah ka jeediyay Shirweynaha Istanbuul.
Madaxweeynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Sh.Axmed ayaa maanta khudbad xasaasi ah ka jeeday shirweeynaha Caalamiga ah ee looga hadlayo arimaha dalka Soomaaliya kaas oo maalintii labaad ka soconaya Magaalada Istanbuul ee dalka Turkiga.
Madaxweeynaha Soomaaliaya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa khudbada uu ka jeediyay shirkaasi waxa ay taabaneeysay dhinacyo kala duwan, waxa uuna Madaxweeynuhu soo hadalqaaday arimaha Amniga.dib u heshiisiinta iyo xaaladda dalku marayo, waxa uuna Madaxweeynuhu xusay in dhanka dib u heshiisiinta ay Dowladu ku guuleeysatay in ay heshiis la gasho Culumaa’diinka Ahlu sunna iyo qeyb ka mid ah Xisbul Islaam.
“Maalmihii u danbeeyay waxaa na soo foodsaaray xasilooni la’aan Siyaasadeed oo gudaha ah, waxaanna ku talajirnaa in aan is bedel asaasi ah ku sameeyno qaab dhismeedka Xukuumadda, taas oo ku imaaneeysa doorashada iyo soo magacaabista koox karti shaqo leh, oo ka howlgala Hey’adaha muhiinka ah ee Qaranka Soomaaliyeed, waxaa kaloo aan dejin doonaa qorshe mudadiisu dheertahay oo looga gol leeyahay dhismaha hey’ado dowladeed oo xasiloon” ayuu yiri Madaxweeyne Sheekh Shariif.
Dhanka kale Xoghayaha guud ee Q.Midoobay Ban ki Moon oo shirkaasi khudbad ka jeediyay ayaa sheegay in Soomaalidu ay leedahay taariikh nabadeed sidaa darteedna loo baahanyahay in si wadajir ah loogu howlgalo sidii dib loogu soo celin lahaa nabad gudaha dalka Soomaaliya.
R/wasaaraha Turkiga Rajab Dayib Ordugan oo marti gelinayay Shirkaasi isla markaana Banki Moon la shirgudoominayay shirkaasi, ayaa sheegay in uu si weyn ugu faraxsanyahay in dalkiisu uu marti geliyo shir noocan oo akle ah oo looga hadlayo arimaha dalka Soomaliya, khudabadahani ayaa qeyb ka ahaa khudbadihii loogu talagalay furitaanka Shirkaasi.
Ganacsato Soomaaliyeed oo aad u faranadan oo shirkaasi lagu casuumay ayaa lagu wadaa in maalinta berito ah madasha shirkaasi ay ka soo jeediyaan khudabado ku aadan xaaladda dalka iyo sida ay gacan uga geeysan karaan dhibaatada ka oogan gudaha dalka Soomaaliya, waxaana la fuliyaa Shirkan in ay ka soo baxaan waxyaabo badan oo faa’uudo u leh ummada Soomaaliyeed ee ka soo daashay dagaalada aan dhamaadka laheyn ee ka holcaya gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho.